Guinea-Bissau: Taorian’ny Fanonganam-panjakàna,Nosamborina Ary Nodarohan’ny Miaramila Ilay Mpitoraka Blaogy Malaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2012 0:16 GMT
Raha nitranga ny fanonganam-panjakàna tamin'ny alin”ny Alakamisy 12 Aprily, fantatr'ireo mpanaraka ny any Guinea-Bissau tsara ny tokony aleho ho an'ny tatitra an-tanin'ady – ny blaogin'ilay mpanao gazety António Aly Silva, Ditadura do Consenso (Jadon'ny marimaritra iraisana).
Aly Silva dia iray amin'ireo mpitoraka blaogy malaza indrindra, raha tsy izy mihitsy no malaza indrindra, any amin'ny firenena kely andrefan'Afrika, ahitàna mponina 1 tapitrisa monja (jereo ny tafatafa nataon'ny Global Voices taminy). Olona miteraka adihevitra izy any amin'ny firenena, satria tsy manafina ny fironany ara-politika. Nefa tsy mbola manam-paharoa izy raha resaka faharetana, fahavitrihana mamoaka lahatsoratra, ary ny fahazotoany manoratra blaogy.
Tamin'ny zoma maraina izy namoaka sary mampiseho ny tranon'ilay mpilatsaka ho filoham-pirenena Carlos Gomes Jr, simba, ary ity farany dia mbola tsy hay izay misy azy taorian'ireo zava-nitranga ny alin'iny. Avy eo kosa nangina Aly Silva taorian'ny maraina nitaterany momba ny fihetsehan'ireo manam-pahefana tao amin'ny tafika. Ny marina dia nosamborina izy teo am-pakàna sary na ampitateram-baovao teo akaikina toby miaramila ka tsy mbola fantatra mazava raha fantatr'ireo nisambotra azy fa be mpihaino amin'ny aterineto izy.
Nahazo olona maherin'ny 1.800 ny vondrona facebook iray noforonina hitakiana ny famotsorana azy. Ary tamin'ny Twitter dia nanomboka nanaparitaka ny sariny ny olona.
10 ora teo ho eo taorian'ny lahatsorany farany, nivoaka Aly Silva, ary nilaza fa navotsotra izy rehefa avy niaritra daroka tamin'ny basy ary nodidiana ny sofiny. Nilaza izy fa nodarohana sy notànana tao amin'ny toby manan-tantara “Fort Amura”, izay nangalàran'ny miaramila izay nidaroka azy ireo fitaovam-pitateram-baovao teny aminy.
Ny lahatsorany farany “SOS: Mila solosaina aho!” dia mampiseho mazava fa niantraika tamin'ny fitorahany blaogy ny fisamborana sy ny halatra natao .